Nkume - Bezzia | Bezzia
na adọkpụkọ Ha bụ ebe nzukọ kachasị mkpa dị na ụwa ejiji iji chọpụta ụdị na ụdị nke na-aga nke ọma ugbu a. Maka nke a, site na Bezzia, anyị chọrọ ịnọ na ha niile ma napụta ọ bụghị naanị ụdị na ọdịdị ndị gafere ha, mana usoro, ụdị, agba na ejiji na-agbanwe.
Na mgbakwunye na mkpuchi na nkọwa niile nke catwalks dị iche iche n'ụwa, anyị chọrọ ka ị mata aha niile kwesịrị ekwesị na-esonye na ha, site n'ụdị ahụ ndị na-emepụta ihe na ọbụna ndị ọbịa pụrụ iche na-aga ụdị mmemme ndị a ma ama.
Nihi na ihe ngosi ejiji mara nma bukwara ihe di na omenaala na njiko nke obodo, nke n’egosiputa ya bu nzuzu na iguzo dika ihe neso.
Anyị na-enyocha usoro nke Paris Fashion Week
por Maria onyekwere eme 2 afọ .
Mgbe anyị nyochachara ihe kacha mma na London na Milan catwalks, anyị amatalarị ụfọdụ n'ime ọnọdụ ndị nwere nnukwu aha ...
Chọpụta usoro nke Milan Fashion Week
N’ọnwa a ka izu ndị eji ejiji na-eso ibe ha. Izu gara aga anyị kọọrọ gị usoro kachasị dị ịrịba ama ...
Nyochaa nke ejiji London Week Week
Anyị enweghị ike ịnụ ụtọ New York Ejiji Izu ka anyị "bịara" ịnụ ọkụ n'obi na onye ọ bụla ...
Igodo ndị dị na ihe oyiyi si Milan Fashion Week
por Maria onyekwere eme 3 afọ .
Mgbe ị tụlesịrị atụmatụ ahụ na New York na London Fashion Week catwalk, ole na ole ịtụnanya ...
London Fashion Week abụrụla izu nke abụọ anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọnwa a ...
Omume niile maka oge opupu ihe ubi site na NYFW
Ntughari ohuru nke New York Fashion Week, NYFW, emere n’etiti September 6 na ...
Omume niile nke izu agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ Barcelona
Izu gara aga emere Valmont Barcelona Bridal Fashion Week na Barcelona, ​​ihe ngosi catwalk nke cosmopolitan ...
Nyochaa nke kacha mma nke Paris Fashion Week
Izu gara aga anyị emeworị nyochaa ụbọchị mbụ nke Paris Fashion Week, ị na-echeta? Taa, anyị na-amalite ebe ...
Na nchikota nke izizi eji ejiji na Paris
Na February 25, otu n’ime ihe kachasị mkpa n’ụwa nke ejiji bidoro, Paris Fashion ...
Izu Udo London na - achikota ndi mmadu ohuru
Mgbe New York gasịrị ụwa nke ejiji kwagara London. Obodo na-anabata si February 14 ...
Uzo kacha mma nke New York Fashion Week
New York Ejiji izu, mbụ isi mba omume na ụwa nke ejiji, abịawo na njedebe….